Phupha ngobhaptizo Discover ▷ Discover Online ▷ ➡️
Ubhaptizo yinxalenye ebalulekileyo yenkolo yobuKristu. Ngabo umntu akaphenduli nje ekubeni ngumKristu, kodwa ukwavuma ukuthembela kwakhe kuThixo.
Ukongeza kwiintsingiselo zayo kubuKrestu, esi siko sikwisimboli ekutolikeni amaphupha. Kuyenzeka ukuba abantu baphuphe bebhaptizwa ngamanzi angcwele okanye babone ubhaptizo lomnye umntu. Abanye bade babe ngoothixo bomntwana kumntwana kwi el mundo yamaphupha.
Iimpawu ezifanayo ezifana nengubo yokubhaptiza, ikhandlela lobhaptizo okanye ifonti yokubhaptiza inokuvela ephupheni. - Kodwa ke, atolikwa njani la maphupha? Masiqwalasele ukutolikwa kwamaphupha:
1 Uphawu lwephupha «Ubhaptizo» - Ingcaciso ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «ubhaptizo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ubhaptizo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Ubhaptizo» - Ingcaciso ngokubanzi.
Yinto eyamkelweyo jikelele ukuba iphupha apho umntu lowo ubhaptizwayo anokuhlala eyi Ukucoca isiqalo esitsha kuba. Ukuphupha kukude ebomini xa ushiya imikhwa yakudala kunye nesimo sengqondo sangaphakathi kwaye uzonwabise ngamathuba amatsha. Ngokwenyani, le inokuba yinkolelo apho kuvela khona impembelelo engazange ibonwe, impembelelo kaThixo.
Ngokusisiseko oku kunokubonwa njengophawu oluqinisekileyo. Nangona kunjalo, umphuphi kufuneka aqinisekise ukuba akazishiyi iinjongo zakhe okanye azihambise kwakhona kuba abanye bayamcela. Naye ngokwakhe kufuneka aqiniseke ngotshintsho kwaye angazivumeli nje ukuba abe ngumdaka wabanye.
Kukwanokusebenza okufanayo ukuba umntu ubona ubhaptizo ephupheni. Oku kukwabonisa entsha Yima ebomini bokwenyani. Oku kukhatshwa kukuzithemba okuzeleyo kunye nokufezekisa iinjongo zakho. Ukongeza, uphawu lwephupha "ubhaptizo" lunokuba ngu xanduva bonisa ukuba umntu ochaphazelekayo kuya kufuneka ajongane nayo kungekudala.
Ngokukodwa, ukuba akagcini nje ngokujonga ubhaptizo ephupheni, kodwa ukwanguThixo othembekileyo kwaye uyamxhasa umntu ukuba abhaptizwe, oku kuyamnyanzela ukuba ayithathele kuye eyakhe imisebenzi kwaye angoyiki kwimisebenzi ebalulekileyo noxanduva.
Nabani na obhaptiza omnye umntu ephupheni uzifumana kumzuzu wobomi apho ahambisa khona ulwazi lwakhe kwabanye kwaye abavumele ukuba bathathe inxaxheba kubulumko bakhe.
Ukubhaptizwa kwenqanawa ngokunxulumene nokwaziswa ephupheni kuzisa impumelelo kunye namaxesha okonwaba ekuvuseni ubomi.
Uphawu lwephupha «ubhaptizo» - ukutolikwa kwengqondo
Kwimeko yengqondo, uphawu "ubhaptizo" lunokudibana ephupheni. imvelaphi yenkolo unayo. Umntu ekubhekiswa kuye unokuba ujongene kakhulu neenkolelo zabo okanye aqale ukuzichaza njengenkolo.
Nangona kunjalo, oku akusoloko kuyinyani: ii-psychoanalysts zicinga ukuba ubhaptizo oluphuphileyo lulandela ngokulinganayo a Ukuziqhelanisa kwakhona Ayisekelwanga kunqulo. Kule meko ukuphupha mhlawumbi ujoyina iqela elinemigaqo ethile, okanye ufunda ukuqonda imiba yobomi bakho bemihla ngemihla kunye nobomi bakho ngokucacileyo kwaye unqwenela ukwenza isiqalo esitsha kule nto ngengqondo elungileyo.
Uphawu lwephupha «ubhaptizo» - ukutolika kokomoya
Ubhaptizo luphawu olubaluleke kakhulu kunye nokuphilisa ngokulinganayo ekuchazeni amaphupha ngokwasemoyeni. Yi Resurrección kubomi obutsha, ngale ndlela nakwinguqu, isiqalo esitsha.